Fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ilay tetik'asa "Pet Lemur survey" - Lemur Conservation Network
You are here: Home › Fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ilay tetik’asa “Pet Lemur survey”
Fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ilay tetik’asa “Pet Lemur survey”
By Fabiola Holiniaina Kjeldgaard on August 10, 2016 in Bilaogy
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny Talata , faha 12 Jolay lasa teo ilay tetik’asa Pet Lemur Survey, izay notanterahana tao amin’ny Trano Koltoraly Amerikanina tetsy Tanjombato nanomboka tamin’ny 2 ora tolak’andro.
“Harenan’i Madagasikarana ny Giro/Varika”, io no teny faneva izay nosaloran’ity foto-drafitr’asa ity izay firaha- miasan’ ireo mpikaroka manokana avy ao amin’ny “Utah University” sy ny “Conservation International”.
Araka ny voalazan’i Pr Kim Reuter dia voalaza fa efa nahatratra ny 28 000 no isan’ireo gidro/varika voalaza fa misy mitana ho toy ny biby fiompy tamin’ny taona 2010 sy 2013 ary indrisy anefa fantatra mazava intsony ny isan’izy ireo na ny antony hitazomana azy ireny ho toy ny biby fiompy.
Izany indrindra no anton’ity fikarohana ity izay afaka tanterahinao amina finday na ihany koa amin’ny fitsidihanao ny tranonkala Pet Lemur Survey izay misy dikany amin’ny teny Malagasy sy Frantsay. Ito Tranonkala vaovao sy ny drafitr’asa fanentanana izay ho tanterahana mandritra ity taona ity moa dia novantsian’ny National Geographic sy ny Margot Marsh primate Action Fund.
Sary niarahana tamin’ny solontenan’ny ministera miandraikitra ny ala sy ny tontolo iainana.
Betsaka dia betsaka tokoa ireo tonga nanotrona ary nahaliana tokoa ireo mpandray anjara nanao famelabelaran-kevitra nandritra izany izay avy amin’ny GERP Madagasikara, Lemur conservation Network, Lemur Rescue Center, sy ireo tompon’andraikitra ao main’ny foto-drafitr’asa. Izy ity moa dia natrehan’ny solontenan’ ny Minisitera miandraikitra ny ala sy ny tontolo iainana, sy ny fiandraiketan’ireo ala voajanahary voaaro (Parcs Nationaux) sy ireo mpanao gazety isan-karazany.
Ireo nandray anjara fitenenana naka sary tamin’ireo mpanotrona sasantsasany
Fankalazana ny Hetsika maneran-tany “Festival mondial des lémuriens” 2015